ट्वाईलेटका कारण मीरासँग डराउँछन् शाहिद - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
१८ पुष,२०७३ | Agency
अभिनेता शाहिद कपूर पहिलो पटक कुनै च्याट शोमा श्रीमती मीरासँग पुगे । आईतबार स्टार वल्र्ड च्यानलबाट टेलिकास्ट भएको शो कफी विद करणमा शाहिद मीराले एकअर्काको बारेमा खुलेर कुराकानी गरेका छन् । मीरा शाहिद भन्दा १३ बर्ष कान्छी छिन् । विवाहको समयमा आफूहरुको उमेरका कारण भएका केही घटनाहरु पनि उनीहरुले कफी विद करणमा बाँडे । जब मीराको घरमा शाहिदको घरबाट विवाहको प्रस्ताव गयो मीराकी आमालाई शाहिदका कान्छा भाई रुहान कपूरका लागि मीराको हात मागेको भन्ने लाग्यो । रुहान र मीरा बराबर उमेरका भएका कारण यो कन्फ्युजन भएको थियो । उनीहरुले त कतैपनि सोचेकै थिएनन् मीराको हात शाहिदको लागि मागिएको छ भनेर । जब शाहिदसँग मेरो विवाहको कुरा चल्यो उमेरका कारण शाहिद विवाहको क्याटगोरीबाट बाहिरिएका थिए, मीराले भनिन् । तर हाल भने मीरा उमेरले मानिसहरुको सम्बन्धमा खासै असर नपर्ने र यो अकं मात्रै भएको बताउँछिन् ।
शाहिद र मीराको विवाह सन् २०१५ मा भएको हो । हाल यो जोडी एक सन्तानको माता पिता बनिसकेको छ । शाहिदले परिवारको रोजाईमा मीरासँग विवाह गरेका हुन् ।
पहिलो भेटमा उनीहरुले पनि एकअर्कासँग उमेरकै बारेमा कुराकानी गरेको कफी विद करणमा खुलासा गरेका छन् । मीराको लागि शाहिदको पहिलो प्रश्न थियो, तिमी किन यति धेरै उमेरको व्यक्तिसँग विवाह गर्दैछौ ? त्यस पछि मीराले पनि उल्टो प्रश्न गर्दै भनेकी थिईन्, तिमी किन यति सानीसँग विवाह गर्दैछौ । यो त झन् गलत भयो नी हैन र ?
कफी विद करणमा शाहिदले आफू मीरासँग डराउने कुरा पनि बताएका छन् । उनी मीरासँग डराउनुको कारण भने ट्वाईलेट हो । शाहिद जब राती ट्वाईलेट जान्छन्, ट्वाईलेटको सिट मिलाउन बिर्सन्छन् । ट्वाईलेटको बिग्रेको सिट देख्ने बित्तिकै मीरालाई रिस उठ्छ र कराउन थाल्छिन् ।
विवाह पछि पहिलो पटक श्रीमतीसँग च्याट शो ‘कफी वीद करण’मा पुगेका शाहिद कपूरले आफूसँग विवाह गर्नुभन्दा पहिले मीराको कति जनासँग..